နာမည်ကျော် ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် လွဲချော်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်
နာမည်ကျော် ကစားသမားတွေကို ငယ်စဉ်က ခေါ်ယူခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် လွဲချော်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်
13 Aug 2018 . 3:14 PM
ဆယ်ကျော်သက် ကစားသမားတွေဆိုတာက ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်၊ တန်ဖိုးမှန်းဆလို့ မရတဲ့ ကျောက်ရိုင်းလိုမျိုး။ သူတို့ကို ခေါ်ယူတဲ့အသင်းတွေအတွက်လည်း ကံကြမ္မာနဲ့ အလောင်းအစားလုပ်ရသလိုပဲ။ အနာဂတ်မှာ ထွန်းတောက်လာမယ့် အနေအထားရှိလို့ ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် ထင်သလောက် မဟုတ်တာ၊ ဖြစ်နိုင်မယ် မထင်ဘူးဆိုပြီး လက်လွှတ်ခဲ့ပြီးမှ လွတ်တဲ့ငါး ကြီးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက တပုံတပင်။ အသင်းတွေ အနေနဲ့ Super Stars တွေကို ငယ်ငယ်တုန်းက ခေါ်ယူခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် လွဲချော်ခဲ့ရတာမျိုးရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် အာဆင်နယ်အသင်းလောက်တော့ မဆိုးသေးဘူးလို့ ဆိုရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ လွှင့်ပစ်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ရိုင်းတုံးတွေက ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အထိ ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့လို့ပါပဲ။ အဲဒီအကြောင်းကို ပရိသတ်တွေ ဗဟုသတအဖြစ် မှတ်သားနိုင်အောင်လို့ ပြန်ပြီး ဖောက်သည်ချချင်တယ် . . .
ယာယာတိုရေး Yaya Toure
အာဆင်နယ်ဂန္ထ၀င် နည်းပြ အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာ ယာယာတိုရေးကို လက်လွှတ်ခဲ့တာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ။ ယာယာတိုရေး အသက်(၂၀)လောက်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ အစမ်းလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ဘားနက်နဲ့ခြေစမ်းပွဲတုန်းက အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ပါဝင်ကစားခဲ့ဖူးပေမယ့် ၀င်းဂါးက ယာယာတိုရေးရဲ့ ခြေစွမ်းက သာမန်ထက် မပိုဘူးလို့ ယူဆခဲ့တာကြောင့် ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးကို အသက်(၁၆)နှစ်အရွယ်မှာ ခေါ်ယူခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် လက်လွှတ်ခဲ့ရတယ်။ အာစင်ဝင်းဂါးက အီဘရာဟီမိုဗစ်ကို အသင်းကြီးနဲ့အစမ်းလေ့ကျင့်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အီဘရာဟီမိုဗစ်က လက်မခံခဲ့တာကြောင့် Gunner တပ်ဖွဲ့ဝင် ဖြစ်မလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် ကစားသမားတွေထဲမှာ အီတလီဂန္ထ၀င် ဘူဖွန်လည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တုန်းက အာစင်ဝင်းဂါးနဲ့ ဘူဖွန်တို့ဟာ အတူတူညစာစားပြီး အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အဆင်ပြေခဲ့ပေမယ့်လည်း စီးရီးအေထိပ်သီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက ဘူဖွန်ကို အဲဒီတုန်းက ဂိုးသမားတစ်ဦးအတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်(၃၂.၆)သန်းနဲ့ ကြားဖြတ် ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့် အာဆင်နယ် ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
အန်ဒါလက်ခ်ျအသင်းနဲ့အတူ တောက်ပလာတဲ့ ကြယ်ပွင့် ကွန်ပနီကို အာဆင်နယ်အပါအ၀င် ဥရောပထိပ်သီးအသင်းတွေက ခေါ်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကွန်ပနီရဲ့အသက်ဟာ (၂၀)နှစ်သာရှိသေးပြီး သူက ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အတွက် ထိပ်သီးအသင်းတွေကို ငြင်းပယ်ပြီး ဟမ်းဘတ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။
အာစင်ဝင်းဂါး ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် ပြင်သစ်ကစားသမားတွေ ဦးစားပေးခေါ်ယူခဲ့တာကို တွေ့ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် ပေ့ါဘာတော့ မပါခဲ့ဘူး။ အာစင်ဝင်းဂါးဟာ ပေါ့ဘာကို ခေါ်ယူဖို့ ၂၀၀၉ခုနှစ်က တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တစ်ကြိမ် အခွင့်အရေးနှစ်ကြိမ်အထိ ရခဲ့ပေမယ့် အသုံးမချနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အာစင်ဝင်းဂါးအတွက် နောင်တရစရာအကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြောပါဆိုရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုကို အခွင့်အရေးရှိရက်နဲ့ မခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်းက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆုကို (၅)ကြိမ်အထိ ရရှိမယ့်သူဖြစ်လာမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အာဆင်နယ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သဘောတူညီမှုရှိခဲ့ပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို(၄)သန်းကိုလည်း စပို့တင်းလစ္စဘွန်းအသင်းက လက်ခံခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ မန်ယူနည်းပြဖာဂူဆန် Ferguson ရဲ့ လက်ထောက်နည်းပြဟောင်း ကွီးရော့ဇ် Queiroz က စီရော်နယ်လ်ဒိုကို မန်ယူကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး မန်ယူအသင်းကလည်း ပေါင်(၁၂)သန်နဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဟိုက်ဘူရီ(ကွင်းဟောင်း)အစား အိုးလ်ထရက်ဒ်ဆီ ခြေဦးလှည့်ခဲ့ပါတော့တယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို မရလိုက်တဲ့ အာစင်ဝင်းဂါးဟာ အဲဒီနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမား ဖြစ်လာမယ့် မက်ဆီကိုလည်း ခေါ်ယူခွင့်ရခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက လာမာစီယာအကယ်ဒမီမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အသက်(၁၆)နှစ်အရွယ် မက်ဆီကို အာစင်ဝင်းဂါးက ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့် မက်ဆီက လာမာစီယာကို စွန့်ခွာဖို့ ဆန္ဒမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါတွေကတော့ အာစင်ဝင်းဂါး လက်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ ကျောက်ရိုင်းတုံးတွေပါပဲ။ ဒီကစားသမားတွေသာ အာဆင်နယ်ကို ရောက်လာခဲ့ရင် အလန်းစားအသင်းကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့်လည်း အခုတော့ ဒါတွေက အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ . . .
နာမညျကြျော ကစားသမားတှကေို ငယျစဉျက ချေါယူခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ လှဲခြျောခဲ့တဲ့ အာဆငျနယျ
ဆယျကြျောသကျ ကစားသမားတှဆေိုတာက ခနျ့မှနျးရခကျတဲ့ ပုစ်ဆာတဈပုဒျ၊ တနျဖိုးမှနျးဆလို့ မရတဲ့ ကြောကျရိုငျးလိုမြိုး။ သူတို့ကို ချေါယူတဲ့အသငျးတှအေတှကျလညျး ကံကွမ်မာနဲ့ အလောငျးအစားလုပျရသလိုပဲ။ အနာဂတျမှာ ထှနျးတောကျလာမယျ့ အနအေထားရှိလို့ ချေါယူခဲ့ပမေယျ့ ထငျသလောကျ မဟုတျတာ၊ ဖွဈနိုငျမယျ မထငျဘူးဆိုပွီး လကျလှတျခဲ့ပွီးမှ လှတျတဲ့ငါး ကွီးခဲ့ရတဲ့ အဖွဈအပကျြတှကေ တပုံတပငျ။ အသငျးတှေ အနနေဲ့ Super Stars တှကေို ငယျငယျတုနျးက ချေါယူခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ လှဲခြျောခဲ့ရတာမြိုးရှိခဲ့ဖူးပမေယျ့ အာဆငျနယျအသငျးလောကျတော့ မဆိုးသေးဘူးလို့ ဆိုရမယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ လှငျ့ပဈခဲ့တဲ့ ကြောကျရိုငျးတုံးတှကေ ကမ်ဘာ့ဈေးကှကျအထိ ထိုးဖောကျနိုငျတဲ့အထိဖွဈခဲ့လို့ပါပဲ။ အဲဒီအကွောငျးကို ပရိသတျတှေ ဗဟုသတအဖွဈ မှတျသားနိုငျအောငျလို့ ပွနျပွီး ဖောကျသညျခခြငျြတယျ . . .
ယာယာတိုရေး Yaya Toure
အာဆငျနယျဂန်ထဝငျ နညျးပွ အာစငျဝငျးဂါး Arsene Wenger ရဲ့ မှားယှငျးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှထေဲမှာ ယာယာတိုရေးကို လကျလှတျခဲ့တာလညျး တဈခုအပါအဝငျပါပဲ။ ယာယာတိုရေး အသကျ(၂၀)လောကျမှာ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ အစမျးလကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးခဲ့ပွီး ၂၀၀၃ ခုနှဈက ဘားနကျနဲ့ခွစေမျးပှဲတုနျးက အာဆငျနယျအသငျးအတှကျ ပါဝငျကစားခဲ့ဖူးပမေယျ့ ဝငျးဂါးက ယာယာတိုရေးရဲ့ ခွစှေမျးက သာမနျထကျ မပိုဘူးလို့ ယူဆခဲ့တာကွောငျ့ ချေါယူခဲ့ခွငျးမရှိဘူး။
အာဆငျနယျအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့တိုကျစဈမှူးတဈဦးကို အသကျ(၁၆)နှဈအရှယျမှာ ချေါယူခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ လကျလှတျခဲ့ရတယျ။ အာစငျဝငျးဂါးက အီဘရာဟီမိုဗဈကို အသငျးကွီးနဲ့အစမျးလကေ့ငျြ့ဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ပွီး အီဘရာဟီမိုဗဈက လကျမခံခဲ့တာကွောငျ့ Gunner တပျဖှဲ့ဝငျ ဖွဈမလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အာဆငျနယျအသငျး ပိုငျဆိုငျခှငျ့မရခဲ့တဲ့ နာမညျကြျော ကစားသမားတှထေဲမှာ အီတလီဂန်ထဝငျ ဘူဖှနျလညျး ပါဝငျခဲ့တယျ။ ၂၀၀၀ ခုနှဈတုနျးက အာစငျဝငျးဂါးနဲ့ ဘူဖှနျတို့ဟာ အတူတူညစာစားပွီး အပွောငျးအရှကေိ့စ်စအတှကျ ဆှေးနှေးခဲ့ပွီး အဆငျပွခေဲ့ပမေယျ့လညျး စီးရီးအထေိပျသီး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးက ဘူဖှနျကို အဲဒီတုနျးက ဂိုးသမားတဈဦးအတှကျ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ(၃၂.၆)သနျးနဲ့ ကွားဖွတျ ချေါယူခဲ့တာကွောငျ့ အာဆငျနယျ ဘာမှမတတျနိုငျခဲ့ဘူး။
အနျဒါလကျချြအသငျးနဲ့အတူ တောကျပလာတဲ့ ကွယျပှငျ့ ကှနျပနီကို အာဆငျနယျအပါအဝငျ ဥရောပထိပျသီးအသငျးတှကေ ချေါယူဖို့ ကမျးလှမျးခဲ့ကွတယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ကှနျပနီရဲ့အသကျဟာ (၂၀)နှဈသာရှိသေးပွီး သူက ပုံမှနျကစားခှငျ့ရဖို့အတှကျ ထိပျသီးအသငျးတှကေို ငွငျးပယျပွီး ဟမျးဘတျအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့တယျ။
အာစငျဝငျးဂါး ချေါယူခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေို ပွနျကွညျ့ရငျ ပွငျသဈကစားသမားတှေ ဦးစားပေးချေါယူခဲ့တာကို တှရေ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ ပွငျသဈကွယျပှငျ့ ပေ့ါဘာတော့ မပါခဲ့ဘူး။ အာစငျဝငျးဂါးဟာ ပေါ့ဘာကို ချေါယူဖို့ ၂၀၀၉ခုနှဈက တဈကွိမျ၊ ၂၀၁၂ ခုနှဈက တဈကွိမျ အခှငျ့အရေးနှဈကွိမျအထိ ရခဲ့ပမေယျ့ အသုံးမခနြိုငျခဲ့ပါဘူး။
အာစငျဝငျးဂါးအတှကျ နောငျတရစရာအကောငျးဆုံး ဆုံးဖွတျခကျြကို ပွောပါဆိုရငျ စီရျောနယျလျဒိုကို အခှငျ့အရေးရှိရကျနဲ့ မချေါခဲ့တာပဲဖွဈလိမျ့မယျ။ ၂၀၀၃ ခုနှဈတုနျးက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးဆုကို (၅)ကွိမျအထိ ရရှိမယျ့သူဖွဈလာမယျ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ အာဆငျနယျအသငျးကို ပွောငျးရှဖေို့ ပုဂ်ဂိုလျရေး သဘောတူညီမှုရှိခဲ့ပွီး ပွောငျးရှကွေ့ေး ယူရို(၄)သနျးကိုလညျး စပို့တငျးလစ်စဘှနျးအသငျးက လကျခံခဲ့ပွီးသားပါ။ ဒါပမေဲ့ မနျယူနညျးပွဖာဂူဆနျ Ferguson ရဲ့ လကျထောကျနညျးပွဟောငျး ကှီးရော့ဇျ Queiroz က စီရျောနယျလျဒိုကို မနျယူကို ပွောငျးရှဖေို့ တိုကျတှနျးခဲ့ပွီး မနျယူအသငျးကလညျး ပေါငျ(၁၂)သနျနဲ့ ကမျးလှမျးခဲ့ပွီးနောကျမှာတော့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ဟိုကျဘူရီ(ကှငျးဟောငျး)အစား အိုးလျထရကျဒျဆီ ခွဦေးလှညျ့ခဲ့ပါတော့တယျ။
၂၀၀၃ ခုနှဈမှာ စီရျောနယျလျဒိုကို မရလိုကျတဲ့ အာစငျဝငျးဂါးဟာ အဲဒီနှဈမှာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမား ဖွဈလာမယျ့ မကျဆီကိုလညျး ချေါယူခှငျ့ရခဲ့ပါသေးတယျ။ အဲဒီတုနျးက လာမာစီယာအကယျဒမီမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ အသကျ(၁၆)နှဈအရှယျ မကျဆီကို အာစငျဝငျးဂါးက ချေါယူဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့ပမေယျ့ မကျဆီက လာမာစီယာကို စှနျ့ခှာဖို့ ဆန်ဒမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါတှကေတော့ အာစငျဝငျးဂါး လကျလှတျခဲ့ရတဲ့ ကြောကျရိုငျးတုံးတှပေါပဲ။ ဒီကစားသမားတှသော အာဆငျနယျကို ရောကျလာခဲ့ရငျ အလနျးစားအသငျးကွီးဖွဈသှားနိုငျပမေယျ့လညျး အခုတော့ ဒါတှကေ အတိတျမှာ ကနျြခဲ့ပွီလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ . . .